အင်္ဂလိပ်စာဖြင့်ဖတ်ရန်စာအုပ် ၆ တွဲ၊ စတင်ရန်လွယ်ကူပြီးပြီးပြည့်စုံသော။ | eReaders အားလုံး
လူအများစုကအင်္ဂလိပ်စာနဲ့စတင်ရေးသားဖို့အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်၊ စာဖတ်ခြင်းအတွက်ဘာသာပြန်မရနိုင်သောကြောင့်ချုံ့ခြင်း၊ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အကြောင်းပြချက်များ (သို့) တိုးတက်လာခြင်းတို့ပါဝင်သည်။ ယနေ့ခေတ်အင်္ဂလိပ်စာကိုဖတ်သူများအားလုံးအတွက်သင့်ကိုကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းချင်ပါသည် အင်္ဂလိပ်စာနဲ့စဖတ်ဖို့စာအုပ်တွေ၊ ဒီစာအုပ်များကိုမစခင်မှာကျွန်တော်တို့ဟာအရင်ကမသိခဲ့တဲ့လူတွေအတွက်စာအုပ်တွေမဟုတ်ကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောချင်ပါတယ်။
အချုပ်အားဖြင့်ဆိုရလျှင်သင်သည် ၆ ခုထဲမှတစ်ခုခုကိုဖတ်ရှုခြင်း၏စွန့်စားမှုကိုစတင်တော့မည်ဆိုပါက အင်္ဂလိပ်လိုဖတ်ရန်စာအုပ်များ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သင့်အားအကြံပြုပါသည်။ သင်သည်အခြေခံကျသောစာအုပ်များကိုပိုမိုဖတ်ရှုရပေမည်။ ကျွန်ုပ်တို့ယနေ့သင်ပြမည့်စာအုပ်များသည်အခြေခံကျကျမဟုတ်ပါသို့မဟုတ်အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်စဖွင့်သောသူများအတွက်ဖြစ်ပါသည်။
1 Ernest Hemingway မှလူနှင့်ပင်လယ်
2 ဝီလျံ Golding အားဖြင့်ယင်ကောင်များ၏သခင်
4 ဂျော့ခ်ျအော်ဝဲလ်၏ ၁၉၈၄
5 မာရိ Shelley အားဖြင့် Frankenstein
6 ထိုအခါ Agatha Christie အားဖြင့်အဘယ်သူမျှမရှိခဲ့သည်
Ernest Hemingway မှလူနှင့်ပင်လယ်
El Ernest Hemingway ၏နောက်ဆုံးထုတ်စိတ်ကူးယဉ်မှု ၎င်းသည်သူ၏အကျော်ကြားဆုံးဝတ္ထုနှင့်သမိုင်းတွင်အကျယ်ပြန့်ပြန့်ဆုံးဖတ်ရှုရသောစာအုပ်များအနက်မှအဆင့်သတ်မှတ်ရန်စီမံခန့်ခွဲမှုတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ ၎င်းတွင်ဟားဗားနား၌နေထိုင်သောစန်တီယာဂိုတံငါသည်သည်မည်သည့်အရာမျှလက်တွေ့မဖမ်းနိုင်သည့်တစ်နေ့တွင်ငါးမျှားနေသောကိုက်နေသောဓားငါးတစ်ကောင်သည်အံ့အားသင့်ဖွယ်ကောင်းသောနေ့တစ်နေ့ဖြစ်သည်။ သင်လက်လွတ်မရသင့်သောဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်၊ အင်္ဂလိပ်သို့မဟုတ်အခြားဘာသာစကားများဖြင့်.
ဝီလျံ Golding အားဖြင့်ယင်ကောင်များ၏သခင်
အဆိုပါယင်ကောင်သည်၏သခင် o ယင်ကောင်တို့၏သခင် ၎င်းသည် ၁၉၅၄ ခုနှစ်တွင်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သော William Golding ၏ပထမဆုံးနှင့်အကျော်ကြားဆုံးဝတ္ထုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အင်္ဂလိပ်စာပေ၏ဂန္ထဝင်ဖြစ်သော်လည်း၎င်းကိုအခြားနိုင်ငံများ၌လူသိများခြင်းမရှိသော်လည်း၎င်းကိုအကြံပြုရန်ကျွန်ုပ်တို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်
လည်း ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းရှိကျောင်းများနှင့်အဖွဲ့အစည်းများအားလုံးတွင်ဖတ်လေ့ရှိသောစာအုပ်တစ်အုပ်ဖြစ်သည်ဒါကြောင့်အင်္ဂလိပ်လိုဖတ်ချင်တဲ့၊ ပျော်မွေ့ချင်တယ်၊ လေ့ကျင့်ချင်တယ်၊
စာအုပ်တစ်အုပ်တည်းတွင်လူသတ်မှုနှစ်ခုသည်အလွန်ကောင်းသည့်ပေါင်းစပ်မှုတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည် ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်စာဖတ်ရန်သင့်အားအကြံပြုခြင်းကိုမရပ်နိုင်ပါ နှစ်ဆသတ်ခြင်း အန်နာလိုပက်ဇ်သည်။ စာဖတ်ခြင်းကိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်အခြေချနေထိုင်သူများအားလုံးအတွက်အထူးအကြံပြုအပ်ပါသည်။
၏ 1984 ဂျော့ခ်ျအော်ဝဲလ် ၎င်းသည်သမိုင်းတွင်လူသိများသောဝတ္ထုများအနက်မှတစ်ခုအပါအ ၀ င်အကျယ်ပြန့်ဆုံးဖတ်ပြီးဘာသာပြန်ထားသောစာအုပ်တစ်အုပ်ဖြစ်သည်။ 1949 ခုနှစ်တွင်ထုတ်ဝေသည်တစ် ဦး ဖြစ်ပါတယ် dystopian စိတ်ကူးယဉ်နိုင်ငံရေးဝတ္ထု, ငါတို့ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်အဘို့အနေရာအနှံ့အဖြစ်အချို့သောဝေါဟာရများကိုဖတ်ရှုနိုင်ခဲ့သည့်အတွက်။
ဤဝတ္ထုကိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်ဖတ်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုများစွာအကျိုးပြုသည်။ ၎င်းသည်ဘာသာပြန်များသည်အလွန်ရှုပ်ထွေးပြီးအလွန်တိကျမှန်ကန်မှုရှိသော်လည်း ၀ တ္ထုများစွာတွင် Orwell မှသူ၏ဇာတ်လမ်းကိုပေးချင်သောအရာတစ်ခုခုပျောက်ဆုံးသွားခြင်းဖြစ်သည် ။
မာရိ Shelley အားဖြင့် Frankenstein
Frankenstein သို့မဟုတ်ခေတ်သစ် Prometheus ၎င်းသည် Gothic ဝတ္ထု၏အစဉ်အလာကိုလူအများကဆုံးဖြတ်ရန်ဆုံးဖြတ်ထားသောဝတ္ထုဖြစ်သည်။ မည်သူမျှကျွန်ုပ်တို့အားဤပုံပြင်အကြောင်းပြောဆိုရန်သို့မဟုတ်ပြောဆိုရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုမလိုအပ်ပါ။ သို့သော် အကယ်၍ သင်သည်နက်ရှိုင်းသောအိပ်စက်ခြင်းမှနိုးလာလျှင်ဤဇာတ်လမ်းတွင်ဇာတ်ကောင်များသည်ဘုရားသခင်နှင့်ပြိုင်ဆိုင်ရန်ကြိုးစားနေခြင်းဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ပြောနိုင်သည်။
များစွာသောသူတို့အတွက် Mary Shelley မှဤဝတ္ထုကိုစဉ်းစားသည် သိပ္ပံစိတ်ကူးယဉ်၏စာပေအမျိုးအစား၏ပထမ ဦး ဆုံးဝတ္ထုတစ်ခု.
ထိုအခါ Agatha Christie အားဖြင့်အဘယ်သူမျှမရှိခဲ့သည်
Agatha Christie သည်ကမ္ဘာ့စာပေ၏ထူးခြားချက်များအနက်မှတစ်ခုဖြစ်ပြီးဗြိတိသျှစာပေ၏အထင်ကရပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်သည်ဒါကြောင့်ဒီရွေးချယ်ရေးမှာသူကသူ့စာအုပ်တွေထဲကတစ်ခုလွတ်သွားတယ်။ သူ၏ကျော်ကြားလှသောဝတ္ထုများကိုကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်ခြင်းမပြုရပါ။ ရွေးချယ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည် ပြီးတော့ဘယ်သူမှမရှိလူသိနည်းသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့ကိုဖျော်ဖြေပြီးရက်အနည်းငယ်ကြာပျော်ရွှင်စွာခံစားနိုင်လိမ့်မည်။
သင်ပိုမိုသိလား အင်္ဂလိပ်လိုဖတ်ရန်စာအုပ်များ? ကျနော်တို့ဖတ်ခြောက်လဖော်ပြခဲ့ပေမယ့်အများကြီးပိုရှိပါတယ်ကတည်းကသင်၏အကြံပေးချက်များကျွန်တော်တို့ကိုချန်ထားပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - eReaders အားလုံး » ယေဘုယျ » စာအုပ်များ » အင်္ဂလိပ်လိုဖတ်ရန်စာအုပ်များ
Nacho Morató ဟုသူကပြောသည်
Baum မှ Oz ၏ Wonderful Wizard